သဘောတူကြောင်းနှင့် သဘောမတူကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြရန် နည်းလမ်းများ - Myanmar Network
သဘောတူကြောင်းနှင့် သဘောမတူကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြရန် နည်းလမ်းများ
Posted by Soe Soe Win on June 6, 2014 at 11:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သဘောတူကြောင်းကို ဖော်ပြရန် နည်းလမ်းများ (Ways of expressing agreement)
That’s right / You're right / I know (အဲဒါအမှန်ပဲ / ခင်ဗျားမှန်တယ် / ကျွန်တော် သိတာပေါ့) တို့ကို တစ်စုံ တစ်ယောက်နှင့် သဘောတူညီသောအခါ အသုံးပြုပါသည်။
It's supposed to beavery good school. အဲဒီကျောင်းက အရမ်းကောင်းတဲ့ ကျောင်းလို့ပြောကြတာပဲ။
That's right. They get great results. အဲဒါအမှန်ပဲ။ သူတို့က ရလာဒ်ကောင်းကြ တယ်လေ။
He's really boring isn't he? သူက တကယ်ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့လူပဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?
Oh, I know, he never stops talking about himself. အို၊ ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ သူ့အကြောင်းကိုပဲ မနားတမ်းပြောနေတော့တာပဲ။
Exactly / Absolutely / I couldn't agree more (အသေအချာပဲ / လုံးဝပဲ / အပြည့်အ၀ သဘောတူတယ်) တို့ကို တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ရာနှုန်းပြည့် သဘောတူကြောင်း ပြောသောအခါ အသုံးပြုပါသည်။
When we were young, people didn't get into debt. ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက လူတွေက အကြွေးမရှိကြဘူး။
Exactly. You just bought what you could afford. အသေအချာပဲ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တာပဲ ကိုယ်ဝယ်ကြတယ်လေ။
I think Jacob is the best person for the job. ဒီအလုပ်အတွက် Jacob က အသင့်တော်ဆုံးလူလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
Absolutely. I'll be amazed if he doesn't get it. လုံးဝပဲ။ ဒီအလုပ်ကို သူ မရရင်သာ ကျွန်တော် အံ့သြမိမှာ။
We had to wait three months to getaphone line – it's ridiculous. ဖုန်းလိုင်းရဖို့ ကျွန်တော်သုံးလစောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။
I couldn't agree more. ကျွန်တော်အပြည့်အ၀ ထောက်ခံတယ်။
You can say that again (ဟုတ်လိုက်လေ/မှန်လိုက်လေ ) / You're telling me (ပြောမနေပါနဲ့တော့) တို့ကို တစ်စုံ တစ်ယောက်နှင့် လုံးဝသဘောတူကြောင်း ပြောသောအခါ အသုံးပြုပါသည်။ ရင်းနှီးသော/အရပ်သုံးသော အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
It' so cold outside. အပြင်မှာ အရမ်းအေးတာပဲ။
You can say that again. မှန်လိုက်လေ။
The buses are so unreliable. ဘတ်(စ)ကားတွေကလည်း စိတ်မချရဘူး။
Your'e telling me. I've been waiting here for half an hour. ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ဒီမှာ ကျွန်တော်စောင့်နေတာ နာရီဝက်ရှိသွားပြီ။
Why not ? (ရတာပေါ့) ကို တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အကြံပြုချက်ကို သဘောတူတဲ့အခါတွင် အသုံးပြုပါသည်။
Let's go to the cinema tonight. ဒီညရုပ်ရှင်သွားကြရအောင်။
Why not? We haven't been for ages. ရတာပေါ့။ ငါတို့မသွားရတာ ကြာလှပေါ့။
I suppose (so) (ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့) / I guess (so) (ရတော့ရပါတယ်။) တို့ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က မှန်ကန်နေသည်ကို သဘောတူသော်လည်း အခြေအနေကို သိပ်သဘောမကျသောအခါမှာ အသုံးပြုပါသည်။
We'll have to get some new tyres. ငါတို့ ဘီးအသစ်တွေ ၀ယ်ရတော့မယ်။
I suppose/I guess so. But it will be expensive. ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်/ ရတော့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးတော့ကြီးလိမ့်မယ်။
သဘောမတူကြောင်းကို ဖေါ်ပြရန် နည်းလမ်းများ (Ways of expressing disagreement)
I'm sorry, but ... /Excuse me, but ... / Pardon me, but ... (တောင်းပန်ပါ ဒါပေမယ့် ... / စိတ်မရှိပါနဲ့ ၊ ဒါပေမယ့် ... / အားတော့နာပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ...) တို့သည် တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် သဘောမတူကြောင်းကို ယဉ်ကျေးစွာ ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
Sorry / Excuse me / Pardon me, but it was never proved that he stole the car. တောင်းပန်ပါတယ် /စိတ်မရှိပါနဲ့ / အားတော့နာပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း ဒီကားကို သူ ခိုးကြောင်းလုံးဝ သက်သေ မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Absolutely not (လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး) / Of course not ... (မဟုတ်တာ) / Nothing of the kind! (လုံးဝမဟုတ်ဘူး။) တို့သည် တစ်ခုတစ်ယောက်ကပြောတဲ့ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝသဘောမတူကြောင်း ဖေါ်ပြရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
I think I should accept the blame for the accident. မတော်တဆ ထိုခိုက်မှုအတွက် တာဝန်ယူလိုက်မှထင်တယ်။
Absolutely not! / Of course not! / Nothing of the kind! There is no way it was your fault. လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ /မဟုတ်တာ/ လုံးဝမဟုတ်တာ။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ခင်ဗျားအမှားမှ မဟုတ်တာ။
I don’t know (မသိပါဘူး) / I take your point (ပြောတာကို လက်ခံတယ်) / That's true but ... (အဲဒါမှန်တယ်ဒါပေမယ့်) တို့သည် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အမှန်တကယ်အားဖြင့် သဘောမတူကြောင်းကို ယဉ်ကျေးစွာဖြင့် ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
Peter is unfriendly sometimes. တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ပီတာဟာ ဖေါ်ဖေါ်ရွေရွေမရှိဘူး။
I don't know. He's always been very kind to me. မသိပါဘူး ကျွန်တော့်အပေါ်ကျတော့ အမြဲပဲ ဖေါ်ဖေါ်ရွေရွေ ရှိတယ်။
These taxes on petrol are far too high. ဓါတ်ဆီပေါ်ပေးရတဲ့အခွန်က သိပ်များလွန်းတယ်ဗျာ။
Well yes, I take your point. But may be that'll encourage people to use their cars less. အင်းဟုတ်တယ် ခင်ဗျားပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်ကပဲ လူတွေကို သူတို့ရဲ့ကားတွေကို လျော့သုံးဖို့ တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်။
She'sadifficult person to work with. သူမဟာ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်မပြေတဲ့ သူပဲ။
That's true. But she'sareally good designer. အဲဒါမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ တကယ့် ဒီဇိုင်းပညာရှင် ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။)
Speak for yourself ... (ဒါကတော့ ခင်ဗျားအမြင်ကိုး ...) သည် တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ထင်မြင်ချက်နှင့် သင်၏ ထင်မြင်ချက်တို့သည် များစွာ ကွာခြားကြောင်းကို ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို တစ်ခါတစ်ရံ မယဉ် ကျေး သော အသုံးအနှုန်းဟု သတ်မှတ်ကြသည်။
We don't mind walking from here. ဒီနေရာကနေပြီး လမ်းလျှောက်သွားတာ ကျွန်တော်တို့အတွက်က ကိစ္စမရှိပါဘူး။
Speak for yourself ! My feet are killing me. ဒါကတော့ ခင်ဗျားအမြင်ကိုး ! ကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေကတော့ သေလုမတတ် နာနေပြီ။
Don't make me laugh (ရယ်စရာလာပြောမနေနဲ့) / Are you kidding? (လာနောက်နေတာလား) / You must be joking (နောက်နေပြန်ပါပြီ) တို့သည် တစ်စုံတစ်ယောက်အား သူနှင့် လုံးဝသဘောမတူကြောင်းနှင့် ထိုသူပြောသော စကားသည် ရူးသောစကားများ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြရာ၌ အသုံးပြုသည်။
I really think the Beatles are overrated. Beatles တွေကို အထင်ကြီးလွန်းကြတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ။
Are you kidding ? / Don't make me laugh ! They're better than any of the modern bands. ရယ်စရာလာပြောမနေနဲ့ /လာနောက်နေတာလား? တခြားခေတ်မီတီးဝိုင်းတွေထက် သူတို့က ပိုကောင်းတယ်ဗျ။
Macmillandictionaryblog.com မှ Ways of expressing agreement and disagreement မှ ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by nay soe thant on June 9, 2014 at 18:58
Permalink Reply by ဇနပုဒ်ရွာသား on June 11, 2014 at 5:58
ှုI couldn't agree more.ကျွန်တော်အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်။(အဲ့ဒီနေရာလေးမရှင်းဖြစ်နေလို့ ဘယ်လိုကြောင့် positive ဖြစ်သွားတာလည်းမသိဘူး ရှင်းပြပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
Permalink Reply by sarah san aye maw on September 18, 2014 at 10:36
This blog has been very helpful - much appreciated!